ko htike's prosaic collection: ကျွန်တော်နှင့် oppositeye
cbox ထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ မေးခဲ့ ပြောခဲ့တာလေးတွေကို ရသလောက် ပြန်ရှာပြီး ဒီမှာတင်လိုက်တာပါ။ cbox ထုံးစံအတိုင်း အောက်ကနေ စဖတ်ပါ။ oppositeye နဲ့ boycott တို့ ၂ ယောက် တပ်မတော်ကို သိက္ခာချတဲ့ စကားတွေ ပြောဆိုနေတာ တွေ့ရမှာပါ၊ တပ်မတော်ကို ဥပဒေမရှိဘူးလို့ သူတို့ ပြောနေကြပါတယ်။
ကိုထိုက်: ဒါပါပဲ တပ်မတော်ကို သိက္ခာချတဲ့ လူတွေနဲ့ ကျုပ်ဆက်မပြောချင်တော့ဘူး
13 Sep 07, 18:30
ကိုထိုက်: ဥပဒေမရှိတဲ့ တပ်မတော်လို့ ခင်ဗျားတို့ ၂ ယောက်ပြောနေတာလို့ ကျုပ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီါ်၊ ခင်ဗျားတို့လဲ တပ်မတော်ကို သိက္ခာချနေတဲ့ လူတွေပဲ
13 Sep 07, 18:29
ကိုထိုက်: လာပြန်ပြီ ဒီသမ္မတ၊ အခု သမ္မတ မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် တရားဥပဒေ တပ်မတော်မှာ ရှိတယ်၊ တပ်မတော်ရဲ့ တရားဥပဒေက သူကို အရေးမယူနိုင်ဘူးလား
Oppositeye: ခင်ဗျားကလဲ ပြောရတာအာပေါက်လာပြီ
13 Sep 07, 18:28
ကိုထိုက်: တပ်မတော်ဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုတ်လား၊ စည်းကမ်းက အသက်မဟုတ်လား၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ စစ်သားဟာ တပ်မတော်ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတာပဲလေ
Oppositeye: သူ့ကို အနားယူလို့ ပြောနိုင်တာ သမ္မတ တစ်ဦးပဲရှိတယ်..
Oppositeye: အေးလေဗျာ..ခင်ဗျားကလဲ တိုင်ပတ်နေပြန်ပြီး..စီနီယာ ရှိတဲ့အတွက် စီနီယာကို အနားယူတော့လို့ ပြောလို့မရဘူးလို့ ကျုပ်ပြောပြီးပဲ .ခင်ဗျားကလဲ
13 Sep 07, 18:27
Ba-Mar Lu-Myo: In Tatmadaw, (military) the order comes from the TOP. In Democracy, the real power comes from the bottom majority. These TWO different systems cannot be combined TOGETHER.
ကိုထိုက်: အဲဒီ ဂုဏ်ကြောင့် ပြောနေရတာပေါ့၊ တရားမင်တဲ့ လူတွေ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေရင် တပ်မတော် ဂုဏ်သိက္ခာကျတာပေါ့
13 Sep 07, 18:26
Oppositeye: သာမာန်ပြည်သူတွေလို မဟုတ်တဲ့အတွက် သာမန်လူလို လုပ်လို့မရပါဘူး
ကိုထိုက်: လာပြန်ပြီ ဒီရွေးကောက်ပွဲ၊ တပ်မှာ စီနီယာ ရှိပြီးသားပဲ၊ သူ့ဟာနဲ့ သူ သွားနေတာ မဟုတ်ဘူးလား
Oppositeye: တပ်မတော်ထဲမှာ သူ့အဆင့်ကိုယ်အဆင့်..အထက်အောက်ရိုသေမှုဆိုတာ ရှိပါတယ်
13 Sep 07, 18:25
Oppositeye: တပ်မတော် သမိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ကို အာဏာဖီဆန်တဲ့ အမှုမျိုးမရှိခဲ့တဲ့အတွက် တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကိုလဲ ထည့်တွက်ဖို့လိုပါတယ်..
13 Sep 07, 18:24
ကိုထိုက်: ကျွန်တော် တပ်မတော်သားတွေ ဘက်က မခံနိုင်လို့ ပြောနေတာ
Oppositeye: ရှင်းပါတယ်..အဲဒီအခါ နိုင်ငံတော် သမ္မတက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်
ကိုထိုက်: အာ ခင်ဗျာတို့ကလည်း ... အဲဒီလို မတရားတာကို တပ်မတော်သားတွေက ငုံခံနေရတာ ၄ သိန်းကျော်တဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ရပ်လုံး အသုံး မကျတဲ့ လူတွေ ဖြစ်သွားရောပေါ့
13 Sep 07, 18:23
Oppositeye: ပြည်သူတွေအလုပ်က ကြိုက်တဲ့သူမဲပေးဖို့နဲ့ အနိုင်ရပါတီကို တပ်မတော်က အာဏာလွဲပေးဖို့ .ဒါပါပဲ
thakhogyithanshwe: That's stupid
13 Sep 07, 18:22
Oppositeye: အခုလက်ရှိမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတွက် အမိန့်နာခံမှုရှိဖို့က တပ်မတော်ရဲ့ သိက္ခာပါ.
ကိုထိုက်: တပ်မတော်က စည်းကမ်းမရှိရင် ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကို ဘယ်သူ့ကို သွားယုံရမှာလြ
13 Sep 07, 18:21
ကိုထိုက်: အဲဒီလို စည်းကမ်းဖောက်တဲ့ လူတွေရဲ့ အမ်ိန့်ကို နာခံနေရတာ တပ်မတော် သိက္ခာမကျဘူလား
Oppositeye: ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို အနားယူတော့လို့ ကျုပ်တို့အဆင့်မှာ ပြောခွင့်မရှိဘူးလေ..ဒါဟာလဲ တပ်စည်းကမ်းပဲ ကိုထိုက်
13 Sep 07, 18:20
ကိုထိုက်: ဒါဆို ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဦးမောင်အေးက စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်နေတာ သေချာနေပြီပေါ့
Oppositeye: တပ်စည်းကမ်းအရ အသက် ၆၀ မှာ အနားယူနိုင်ပါတယ်..ခင်ဗျာ
thakhogyithanshwe: Hay ,Ko htait _ oppsiteye answer is so stupid and so funny ,that guy is not your level.
13 Sep 07, 18:19
ကိုထိုက်: ကျွန်တော် မေးတာ ဖြေပါ၊ တပ်မတော်သား တစ်ယောက် တပ်စည်းကမ်းအရ ဘ်ာအသက်အရွယ်မှာ အနားယူရသလဲ
13 Sep 07, 18:18
Oppositeye: ကာကွယ်ဦးစီချုပ်ကို အခြားအဆင့်က ပယ်ဖျက်လို့ မရသလို ခန့်ထားလို့လဲမရပါဘူး..ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ရွေးမဲ့သူဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ကိုထိုက်
13 Sep 07, 18:17
ကိုထိုက်: အဲဒါသာ ဖြေပါ
ကိုထိုက်: တပ်မတော်ရဲ့ ဥပဒေမှာ ဘယ်အချိန် တပ်မတော်သား တစ်ယောက် အနားယူရသလဲ
Oppositeye: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးလို့မရဘူး..သူ့ကို ရွေးချယ်တဲ့သူဟာ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ သမ္မတကရွေးချယ်မှာပါ.ဒါကြောင့် ကျုပ်ပြောနေရတာပါ
13 Sep 07, 18:16
ကိုထိုက်: ခင်ဗျား ဘေးချော်နေပြန်ပြီ
ကိုထိုက်: တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကို ခင်ဗျားပြောသလို ၂၀၀၈ မှာ လုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးမယ်၊ တင်ကြမယ် ထားပါတော့
13 Sep 07, 18:15
Oppositeye: အခုလက်ရှိမှာတော့ တပ်မတော်သားတွေဟာ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမိန့်ကိုနာခံရမှာပါ..ဒါဟာ ကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး..ပြည်သူတွေ ရွေးကောက်လိုက်လို့ ကိုထိုက်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်လဲ တပ်မတော်က ကိုထိုက်အမိန့်ကိုနာခံမှာ
ကိုထိုက်: ကျွန်တော်ပြောနေတာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အတွက် မပြောဘူး၊ ကာကွယ်ရေး ဥိးစီးချုပ်အတွက် ပြောတာ
13 Sep 07, 18:14
ကိုထိုက်: ခင်ဗျားက ရွှေးကောက်ပွဲပဲ ပြောနေတယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးလို့ရလို့လား
ကိုထိုက်: တပ်မတော်သားတွေရှိတဲ့ တပ်မတော်မှ ဥပဒေကို မလိုက်နာရင်၊ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်သူက လေးစားမှာလဲ၊
13 Sep 07, 18:13
Oppositeye: ကိုထိုက်အနေနဲ့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးနိုင်ပါတယ်..
13 Sep 07, 18:12
ကိုထိုက်: ခင်ဗျားက အခု တပ်မတော်ကိုနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာထက် ဥိးသန်းရွှေကို ကာကွယ်နေတာ ဖြစ်နေပြီ၊ စဉ်းစားကြည့်ဦး
Oppositeye: မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးနှောက်ယိုစီးမှု များနေတဲ့အတွက် ပညာရှင်တွေ ရှားပါးတာဖြစ်နေတာပါ..
13 Sep 07, 18:11
Oppositeye: အဲဒီတော့ ပညာရှင်ရော..ပစ္စည်းရော စိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်တဲ့ နီုင်ငံကို များများပေးရတာ မဆန်းပါဘူး..
ကိုထိုက်: အာဏာသိမ်းဖို့ မပြောဘူး၊ ဥပဒေအရ သူတို့ အနားယူခိုင်းလိုက် သူရရွှေမန်းကို ဥပဒေအရ တင်လိုက်၊(ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ပြောတာ) ဥပဒေမှ သူတို့ မလိုက်နာရင် အရေးယူလိုက်ပေါ့ဗျာ
Oppositeye: ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်တယ်ဆိုတာ အကျိုးတူရင်းနှီးပြီး အကျိုးတူ ရယူတာကို ဆိုလိုပါတယ်..မြန်မာပြည်မှာ အကျိုးတူ မရင်းနှီးနီုင်ပါဘူး..ပညာရှင်နဲသလို ပစ္စည်းစိုက်ထုတ်မှုမှာလဲ နဲပါတယ်.
13 Sep 07, 18:09
ကိုထိုက်: ဒါလေးမှ မလုပ်တတ်ရင် စီးပွားရေးသွားလုပ်နဲ့ တရုပ်က ခင်ဗျားတို့ကို လုပ်ချင်ရာ လုပ်သွားလိမ့်မယ်
Oppositeye: အဲဒီလို လုပ်တာတရားဝင်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူရရွှေမန်းတက်လာလဲ အာဏာသိမ်းတယ်လို့ ဖြစ်နေမှာပါပဲ..ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
13 Sep 07, 18:08
ကိုထိုက်: အာ ... ခင်ဗျားကလဲ၊ အစိုးရတစ်ရပ်မှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဆိုတာ ရှိတယ်
Oppositeye: ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်တဲ့ နိုင်ငံက ၆၀ % .မြန်မာနီုင်ငံက ၄၀ % ပဲရပါတယ်..
13 Sep 07, 18:07
ကိုထိုက်: ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် သူရရွှေမန်းကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုတယ်၊ တရားမ၀င် သန်းရွှေနဲ့ မောင်အေးကို ဒေါ်စုနဲ့ အတူ အကျဉ်းချပြီး တိုင်းပြည်က မောင်းထုတ်မယ်
Posted by ကိုထိုက် at 17:34
You military crap.. stop killing people
13 April 2009 at 15:44